Mac အတွက် Apple TV အသစ်၏နောက်ခံပုံများ | ငါက Mac ကပါ
သင်၏ Mac အတွက် Apple TV နောက်ခံပုံအသစ်များ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac OS X ကို, Mac ကွန်ပျူတာများ, အတော်ကြာ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Apple သည်မျိုးဆက်သစ်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Apple က TV ကိုအောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နှင့်အမှာစာများစတင်သည်။ ကိရိယာအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်နှစ်ခုတွင် Siri ရှာဖွေမှုနှင့်ရွေ့လျားမှုဖန်သားပြင်အသစ်များပါ ၀ င်သည် ဤဆောင်ပါး Mac ၌မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင့်အားပြသပါသည်။ အခမ်းအနားကိုဆင်နွှဲရန်၊ ဒီနောက်ခံပုံပါရုပ်ပုံများကို Apple TV မှလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ @JasonZigrinoအက်ပဲလ်တီဗီလိုဂိုတွင်နံရံကပ်နံရံကပ်ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည် Mac ကွန်ပျူတာများ၏မျက်နှာပြင်များနှင့်အချို့မြို့များမှလှုံ့ဆော်ပေးသည့်နောက်ခံအရောင်သေးသေးလေးများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Apple TV အသစ်မှာ ရွေ့လျားဖန်သားပြင် ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင် အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောအခါအထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Mac ပေါ်တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအရောင်နှင့်မြို့နှင့်ဆက်စပ်သော screen savers များကိုတွေ့ရမည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ iMac 5K, MacBook Air, MacBook Pro နှင့် iMac။ ရုပ်ပုံများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည့်နောက်ခံပုံများရှိအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်၏ဗွီဒီယိုအပိုင်းအစများမှထင်ရှားသည်။ ဤပုံများ၏အသေးစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့် Apple TV ဖန်သားပြင်မှသိမ်းဆည်းသူများသည်လက်တွေ့ကျကျနောက်ခံပုံများဖြင့်အလွယ်တကူပြောင်း။ မရပါ၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဗီဒီယို၏မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ကူးခြင်းသည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောနောက်ခံများဖြစ်လိမ့်မည်။
ပုံမှန် download လုပ်ပါ: ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀); ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀).
တရုတ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀); ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀).
ဟာဝိုင်ယီကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀); ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀).
London ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀); ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀).
နယူးယောက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀); ၁၆ x ၉ (၅၁၂၀ x ၂၈၈၀).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » အတော်ကြာ » သင်၏ Mac အတွက် Apple TV နောက်ခံပုံအသစ်များ
Apple TV အသစ်၏ထိန်းချုပ်မှုသည်ကျဆင်းခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်